Tuesday September 16, 2014 - 05:25:25 in Jaamacadda by Super Admin
Ilaah ayaa mahad is ka leh, asiga ayaan mahadinaynaa, kaalmo waydiisahaynaa, kana megen gelaynaa dhibka nafafyaashayna iyo xumaanta waxa aan samaynay.
Qofkii uu allah hanuuniyo cid baadiyeyn karta malahan, cidii uu allah baadiyeeyane cid hanuunin karta malahan. Waxaan qirayaa in uu san ilaah jirin ilaahay kaliye mooyee oo aan waxba lala wadaajin, sidoo kale waxaan qirayaa in Nabbi Mohamed (Naxariis iyo Nabad gelyo Korkiisa ha ahaatee) uu yahay adoonkii allah iyo rasuulkiisa, allah ayaa soo diray asigoo naxariis ah una soo diray dhamaan umamada adoonka ku nool asigoo hanuuninaayo, faraxgelinaayo unane digaayo. Waa uu soo gaarsiiyay fariinti loo soo dhiibay waana gutay wixi lagu amaaminay waana unaseexeeyay umada, waxowna ku dagaalamay wada allah si dhab ilaa dhabtii uga timaado. Naxariisyaasha allah iyo nabadgelyadiisa korkiisa ha ahaato asiga iyo elehkiisa, asaxaabtiisa iyo in alle intii ku raacday wanaag ilaa laga gaaraayo maalinta abaalmarinta.